Madaxwaynaha maamulka gobleedka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xarigga ka jaray sadex waddo oo laami ah iyo dhismaha bangiga dhexe ee magaalada Gaalkacayo.
madaxweryne Gaas ayaa waxaa xarig jarka waddooyinkaasi iyo dhismaha bangiga dhexe waxaa ku wehelinaayey guddooyimaha gobolka Mudug, duqa degmada Gaalkacayo, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland iyo masuuliyiin kale.
Waddooyinka muhiim ka ah ee Madaxweynuhu xadhigga ka jaray ayaa waxaa ka midda ahaa waddada Cumar Dheere oo dhererkeedu yahay 1km iyo 140m [ Hal kiloo mitir iyo bogol iyo afartan miter], waddada Xero-dayaxay oo dherer keedu yahay 200m[ laba boqol oo Miter], iyo waddada Gaadda Yare oo iyana dherer keedu yahay (labo kilomitir) 2km.
Madaxweyne Gaas oo ka hadlay waddooyinkaasi uu xadhigga ka jaray ee halbowlaha u ah magaalada Gaalkacayo ayaa sheegay in ay waddooyin kani muhiim u yihiin bilicda iyo horumarka magaalada, waxaana uu mahad balaadhan u jeediyey hawlwadeenada degmada Gaalkacayo oo iyagu hirgeliyey dhismaha waddooyin kani.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa soo kormeeray dhismaha isbitaalka weyn ee magalada Gaalkacayo oo dhismihiisu marayo heer gebogebo ah, dhismaha suuqa xero dayax, xarunta Wasaaradaa Ganacsiga, iyo xarunta Wasaaradda kaluumaysiga oo dhismaheedu heer gebo-gebo ah marayo.
December 26, 2017 tuugahaladilo2015